၇။ ၂၀၂၁/၂၀၂၂ အခမဲ့ပညာသင်ဆုအတွက်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်နိုင်ငံခြားတွင်ပညာသင်ကြားလိုသောအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး၊ ယခုလက်ရှိကျောင်းသတင်း
ငါနိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာချင်တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ရတာဟာကျောင်းသားတွေရဲ့အိပ်မက်တစ်ခုပါ။ သို့သော်ကျူရှင်ခများခြင်းသည်ဤအိပ်မက်ကိုမကြာခဏထင်မှတ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကလမ်းတစ်လမ်းရှိသေးတယ်လို့ပြောရင်ကော။
ဒါ့အပြင်နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ဖို့အခမဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်လို့ပြောရင်ခင်ဗျားယုံမှာလား။ မင်းကိုချိုးဖောက်ဖို့ငါ့ကိုခွင့်ပြုပါ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်နိုင်သေးတယ်။ ဤရွေ့ကား, တဆင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပညာသင်ဆု.
In ဤဆောင်းပါးတွင်ပြည်ပမှာပညာသင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ပညာသင်ဆုအချို့ကိုသင်ရမယ်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျလုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှတွေ့ဆုံရန်ဖြစ်ပါတယ် အရည်အချင်းပြည့်မီ။ ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ချင်တဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိတွေပါ ပညာသင်ဆု:
၁။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Hubert Humphrey Fellowships
ဤပညာသင်ဆုသည်အတွေ့အကြုံရှိပညာရှင်များအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အမေရိကန်နှင့် Fellows ၏အိမ်တွင်းနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဗဟုသုတနှင့်နားလည်မှုဖလှယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့၏ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်စိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Fellows များကိုအမေရိကန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတွင်ထားရှိသည်။ ဒါ့အပြင် အပေါင်းအဘော်တို့ မည်သည့်တက္ကသိုလ်တက်ရမည်ကိုမရွေးချယ်နိုင်ပါ။ ယင်းအစားသူတို့ကို ၇-၁၅ မတူညီသောအုပ်စုများတွင်အသင့်တော်ဆုံးအိမ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းသို့ခန့်အပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူတို့၏စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်အပေါ်မူတည်သည်။
ထို့အပြင် ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ထိုအုပ်စုသည်ဆာဟာရသဲကန္တာရတောင်ပိုင်းရှိအရည်အချင်းပြည့်မီသောနိုင်ငံများ၏နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဥရောပနှင့် Eurasia ၏သူတို့အား။ ထိုအခါအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိက၏သူတို့အား။ အရှေ့အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ဒေသများ။ ထို့အပြင်တောင်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းနှင့်အနောက်ခြမ်း။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: ဤအချက်အလက်အတွက်လျှောက်လွှာ link ကိုကြည့်ပါ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူတစ် ဦး ရှိရမည် ဘွဲ့ကြို (ပထမတက္ကသိုလ်) ဒီဂရီ။ ထို့အပြင်အချိန်ပြည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးငါးနှစ်ရှိရမည်။ ထို့အပြင် US တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ ထို့အပြင်ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းများကိုပြသရမည်၊ ရပ်ရွာလူထုတွင်အများပြည်သူ ၀ န်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းရှိရမည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ရှိရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၏ 1 အောက်တိုဘာလမတိုင်မီ။
ရရှိနိုင်ဆုပေးပွဲ: နှစ်ရာ (200) ။
2 ။ အနောက်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးပညာသင်ဆုများ
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် အကောင်းဆုံးငါနိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုအတွက်ပြည်ပမှာလေ့လာချင်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ထူးချွန်သောကျောင်းသားများအတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့အပြင်အနောက်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်၏သံအမတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်လိုသူများအတွက်လည်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ အနောက်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်မှထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသိခြင်းသည်သက်ဆိုင်သည်။ အနောက်လန်ဒန်ရှိအချိန်ပြည့်ဘွဲ့ကြိုသို့မဟုတ်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများလည်းပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီပညာသင်ဆု၏ပစ်မှတ်အုပ်စုသည် Non-EU ဖြစ်ကြသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ.
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: £ 5,000 ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူများသည်ဤတက္ကသိုလ်တွင်သင်တန်းတက်ရန်လျှောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ခံချက်အရာရှိတ ဦး ထံမှတရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြရပေမည်။ ဒါ့အပြင်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံတကာကျောင်းသားသံအမတ်ဖြစ်ရန်စွမ်းရည်ကိုပြသရပါမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: နှစ်စဉ်မတ်လ ၃၀ ရက်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်။
ရရှိနိုင်ဆုပေးပွဲ: တစ်ရာ (၁၀၀) ။
ဤပညာသင်ဆုများသည် ၀ င်ငွေနည်းသော၊ အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံသားများကိုဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ (သို့မဟုတ်အိန္ဒိယနှင့်တရုတ် မှလွဲ၍) မှ ၀ င်ငွေနည်းသော၊ အလယ်အလတ် ၀ င်သောနိုင်ငံများရှိပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပါရဂူဘွဲ့လွန်သုတေသနကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ ဒါ့အပြင်အခမဲ့ပညာသင်ဆုအတွက်ပြည်ပမှာပညာသင်ချင်တဲ့အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုပါ။
သို့သော်သုတေသနစီမံကိန်းအတွက် ၀ င်ငွေနည်းသောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံရှိအရည်အချင်းပြည့်မီသောအိမ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းတွင်သင်အခြေချရမည်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဖြစ်နိုင်သလဲ။
သင်၏အိမ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းကသင်လိုအပ်သောနေရာနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပေးရန်သဘောတူရမည်။ ဤရွေ့ကား, သင်သည်အစကရက်စွဲကနေသင့်ရဲ့ဆုအဆုံးသတ်နေ့မှသည်။ သို့သျောလညျး, သငျသညျဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာထူးချွန်စင်တာများမှာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ သင်သည်အောက်ပါ application link မှအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိသည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: £ 150,000 မှ£ 300,000 ။
လိုအပ်ချက်: ဘွဲ့လွန်လျှောက်ထားသူများသည်ဘွဲ့ကြိုဘွဲ့တစ်ခုရှိရမည် (သို့) ပြီးဆုံးတော့မည် ဖြစ်၍ မဟာဘွဲ့သို့မဟုတ်ပါရဂူဘွဲ့ယူလိုကြသည်။ ဒါ့အပြင်ပါရဂူဘွဲ့သုတေသနအတွက်လျှောက်ထားသူတစ် ဦး ပါရဂူဘွဲ့သို့မဟုတ်အလားတူနှင့်အတူသုတေသီများဖြစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင်အဆိုပြုထားသောသုတေသနသည် ၀ င်ငွေနည်းသောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောတိုင်းပြည်တွင်ကျန်းမာရေး ဦး စားပေးမှုကိုအာရုံစိုက်ရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: ဒုတိယအကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးရက်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်2ပြီ ၃၀ (ပဏာမလျှောက်လွှာ) ဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝလျှောက်လွှာများအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ 30 ဇူလိုင်လ 2021 နေစဉ်။
၄။ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာပညာသင်ဆုများ
၀ င်ငွေနည်းခြင်းနှင့်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံများမှကျောင်းသားများအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာသင်ဆုနှစ်မျိုးရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤပညာသင်ဆုသည် John Hopkins တက္ကသိုလ်ရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွင်အွန်လိုင်းအသုံးချသိပ္ပံ (MAS) လျှောက်ထားလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
သတိပြုပါ စာရင်းသွင်းထားသော MAS ကျောင်းသားများအားလုံးသည် OPAL (လျှောက်ထားသောသင်ယူမှုတွင်အွန်လိုင်းပရိုဂရမ်များ) ပညာသင်ဆုရရှိလိမ့်မည်။ နှင့်ဤပညာသင်ဆုတစ် per- အကြွေးပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တစ်လျှောက်လုံးလိုအပ်သောသင်တန်းများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀ ။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူများသည်နိုင်ငံသားများနှင့် ၀ င်ငွေနည်းသောသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသောနိုင်ငံသားများဖြစ်ရမည်။ ဝင်ငွေမြင့်သောနိုင်ငံများတွင်ယာယီနေထိုင်ရန်လည်းလိုသည်။ ထို့အပြင်အင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ နားလည်နိုင်သောသူများသာအရည်အချင်းပြည့်မီသည်။ ထို့အပြင်လျှောက်ထားသူသည်အောင်မြင်သောပညာသင်နှစ်အောင်မြင်မှုရှိသည့်အနည်းဆုံးဘွဲ့ရရှိထားရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ ၁၅ ရက်။
ရရှိနိုင်ဆုပေးပွဲ: နှစ် (၂) ။
Exeter တက္ကသိုလ်မှ MSc စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုပညာသင်ဆုများ
တနည်းကား၊ ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုအတွက်ပြည်ပ၌ပညာသင်ကြားလိုသောအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် MSc စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်နေရာရရှိထားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ၀ င်ခွင့်အတွက် Exeter တက္ကသိုလ်၌ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ကျောင်းသားများအတွက်အပြည့်အဝအခကြေးငွေပညာသင်ဆုနှစ်ခုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသား ၁ ဦး အားချီးမြှင့်မည်။ ယူကေသို့မဟုတ်ဥရောပယူနီယံမှကျောင်းသားတစ် ဦး ။
ထို့အပြင်ပညာသင်ဆုကို MSc စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်တွင်လျှောက်ထားပြီးလျှောက်ထားခဲ့သည့်ရင့်ကျက်သည့်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: တစ်ခုအပြည့်အဝအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြေးဆု။ တစ်နှစ်စာအိမ်ရှင် / အီးယူကြေးဆုတစ်ခု။
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူများသည်ရင့်ကျက်သောလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဘာသာရပ်အတွက် 2:2ဒီဂရီသို့မဟုတ်အထက်ကိုင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ပညာသင်ဆုကသင့်အားအင်္ဂလိပ်စာအဆင့် IELTS 7.0 ရှိရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ၆.၀ ထက်နည်းသောအပိုင်း၊ သို့မဟုတ်အင်္ဂလန်ဖုန်းမဟုတ်သောနိုင်ငံမှ၎င်းနှင့်တူသည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းAprilပြီလ ၃၀ ။
(၆) Bradford တက္ကသိုလ်မှငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုနှင့်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးပညာသင်ဆု
ဘရက်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်မှငြိမ်းချမ်းရေးလေ့လာမှုနှင့်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (PSID) ပညာသင်ဆု (၂) ခုကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ သူတို့သည်နိုင်ငံတကာလျှောက်ထားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အိမ်တွင်းကျောင်းသားများ (များသောအားဖြင့်ယူကေနှင့်ဥရောပမှကျောင်းသားများ) အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အခကြေးငွေလျှော့ချရန်အတွက်£ 5000 ပညာသင်ဆုကိုချီးမြှင့်မည်။ နေအိမ်ကျောင်းသားများအတွက်အခကြေးငွေလျှော့ချရန်အတွက်£ 2000 ပညာသင်ဆုကိုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
7. Erasmus တက္ကသိုလ်ဟော်လန်ပညာသင်ဆု
တနည်းကား၊ ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုအတွက်ပြည်ပ၌ပညာသင်ကြားလိုသောအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပညာသင်ဆုကိုဒတ်ခ်ျပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သိပ္ပံ ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် Erasmus University Rotterdam တို့ကထောက်ပံ့သည်။
ထို့အပြင်ပညာသင်ဆုကိုဥရောပစီးပွားရေးAreaရိယာပြင်ပမှနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ပြီးတော့ Holland ရှိသူတို့၏ Bachelors (သို့) Masters ဒီဂရီများရလိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်မည်သည့်ဘာသာရပ်နှင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်တွင်မဆို Bachelors နှင့် Masters ဘွဲ့ကိုအကျုံးဝင်သည်။ သို့သျောလညျး, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုရေးလေ့လာရေး Institute (ISS) မှာလေ့လာမှုများမှလွဲ။ ။ နှင့် Erasmus ဒPhilနိကဗေဒကျောင်း (ESPhil) အတွက်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ။ ဒPhilနိကဗေဒနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသုတေသနမာစတာကျောင်းသားများသာရထိုက်သည်။
ဆုချီးမြှင့်ငွေပမာဏ: ယူရို ၅၀၀၀၊ ယူရို ၁၀၀၀၀ (သို့) ယူရို ၁၅၀၀၀ (ဒြေမှဆုံးဖြတ်ရန်)
လိုအပ်ချက်: လျှောက်ထားသူများသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကျူရှင်အခကြေးငွေပေးရမည့် EEA မဟုတ်သောနိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမည်။ ထို့အပြင်သက်ဆိုင်ရာဆရာများ၏စံသတ်မှတ်ချက်အရအကောင်းဆုံးကျောင်းသားများဖြစ်ရမည်။ Erasmus University Rotterdam တွင်အချိန်ပြည့်ဘွဲ့ယူရန်လျှောက်ထားရမည်။ ထို့အပြင်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်ဒီပလိုမာမရရှိသည့်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ရမည်။
သတ်မှတ်နောက်ဆုံးအချိန်: 1 ဖေဖော်ဝါရီ / 1 မေလ 2021 ။
အထက်ပါအချက်များသည်ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုအတွက်ပြည်ပ၌ပညာသင်ချင်သောထိပ်တန်းများထဲမှအချို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီသင်ရွေးချယ်သောအရာသည်သင့်တော်သည်ကိုသေချာစေပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
နိုင်ဂျီးရီးယားရှိ Multidimensional Poverty တိုင်းတာခြင်း - လူ ဦး ရေနှင့်ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းမှအထောက်အထား
Consolidated Hallmark အာမခံစာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲ 2020 | လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်နှင့်လိုအပ်ချက်များ
နိုင်ဂျီးရီးယားရှိ Gsm စာရင်းပေးသွင်းသူများအတွက်မိုဘိုင်းနံပါတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အတွက်အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်တိုးတက်လာသောပုံစံ
အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ကြို ၀ င်ခွင့်လမ်းညွှန်နှင့်လိုအပ်ချက်များ - ၂၀၂၀ / ၂၀၂၁ ။
နိုင်ဂျီးရီးယားရေတပ် DSSC သင်တန်း 28 လူသစ်စုဆောင်းမှု 2021 www.joinnigeriannavy.com
« 17 အကောင်းဆုံးအပြည့်အဝငွေကြေးထောက်ပံ့ထားသောအင်ဂျင်နီယာပညာသင်ဆု 2021/2022 Portal Updates
Haryana ပညာသင်ဆု 2021/2022 လျှောက်လွှာ Portal haryana.gov.in »